रस बर्कले बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर युरोपियन स्टार रस बर्कले बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'रोसी'। हाम्रो रस बर्कले बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समयदेखि उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म पुग्नुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र उनको बारेमा धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको आक्रामक मिडफील्ड क्षमताको बारेमा जान्दछन् तर केहि कम रस बर्कले जीवनीको बारेमा सोचेका छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रस बार्कले युनाइटेड किंग्डमको लिभरपूलमा डिसेम्बर5को 1993th दिनमा जन्मेको थियो।
उहाँ जन्मेको एक भाग हुनुहुन्छ। उनी एक नाइजीरियाका पिता, पीटर इकंगामा जन्मेका थिए, जो एक मोटरसाइकल इन्जिनियर र एक ब्रिटिश आमा, डायन बर्र्कले (होम क्यारियर) हुन्।
रस, को उत्तर को बजाए Effanga को जवाब को लागी उनको आमा को प्रथम नाम को जवाब को लागी 'बर्कले'बढ्दो सम्बन्धको कारण उनी आफ्नो नाइजीरियाका पितासँग उठिरहेका थिए।
रसले आफ्नो बुबाको प्रयासको लागि फुटबल धन्यवाद खेल्न थाले जुन एक प्रवासी व्यक्तिको रूपमा, यो आफ्नो मात्र उत्तराधिकारीलाई आफ्नो सबैभन्दा लाभदायक पेशामा फुटबल गर्न मात्र सम्भव बनाइयो। यो पनि यूरोपमा प्रवासी आमाबाबुको मामला थियो। आमाबाबुको लेरोया सेन, Mesut Ozil, क्रिश्चियन बेंटे आदि प्रमुख लाभार्थीहरू हुन्।
पत्रुसले आफ्नो पिता, पत्रुस रस मार्फत सामेल भयो Everton 11 वर्षको उमेरमा फुटबल प्ले गर्न शुरू गर्यो। उहाँले मार्फत प्रगति गर्नुभयो Evertonian युवा प्रणाली। एक किशोरको रूपमा हेडलाइनहरू बनाउनका लागि रोसलाई विकास हार्मोनको रूपमा चिनिन्थ्यो र जीनले उनलाई साथीहरूको तुलनामा अझ बढ्दो बनाइदिन्छ र यहाँका प्रतिद्वंद्वीहरू तल चित्रित रूपमा चित्रण गरेको थियो।
रस बर्कले आफ्नो बचपनको दौडान जीआईटी को रूपमा देखाए
Romelu Lukaku उही विकास सिंड्रोम पनि देखा पर्यो। वास्तवमा, 15 मा, Ross पहिले नै under-18 पक्षसँग मिश्रण भएको थियो। यो यसको अत्यधिक शरीरको निर्माणको कारण थियो। धेरै पटक, उहाँले आफ्नो युवा टोलीलाई प्रमुख विजय हासिल गरे र इको कप जस्तै पूर्व लिवरपूल मालिक द्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रमुख टूर्नामेंट जित्ने Rafa Benitez.
राफा रसलाई ट्राफी पुरस्कार प्रस्तुत गर्दै
बर्कले उनको XTUMX-2010 सिजनको प्रारम्भिक चरणमा टोफिसको पहिलो खेलको अपेक्षा गरेको थियो तर पछि उनीहरूले एक गंभीर टाउको चोटलाई पछाडि ढिलो गरे। उहाँले लिभरपूलको साथ टक्कर गर्नुभयो अन्डर बुद्धि जबकि इंग्लैंड अन्त-19 को साथ ड्यूटी मा।
डिसेम्बर 2011 मा, 18 मोर्दा केही समय पछि, उनले नयाँ लम्बाई-सम्झौता सम्झौता गरे Everton। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
सुपर भाग्य रस बर्र्कले सबैभन्दा शान्त छ, व्यावहारिक, समझदार, यथार्थवादी र अधिक जिम्मेवार प्रेमिका, वाग र समेमी पत्नी हुन। जो जो रियजजी भन्दा कुनै अन्य व्यक्ति होइन।
सायद तपाईंले सोध्नुभयो ..., हामीले किन यति धेरै प्रशंसा गरेका छौं? ...। निम्न कारणहरू छन्;
जोओ रियोजाजी एक तलतिर पृथ्वी व्यक्ति हो। उनको लंगडा-बासीले सबैलाई चित्रण गर्दछ। उनी फुटबलरकी श्रीमती र प्रेमिकाले लुगा लगाउँदा कुकुर हील्सको तुलनामा आफ्नो काम वर्दी र फ्लैट-सोलिएको जूतामा साधारण पार्का जैकेट पहिरन मन पराउछिन्।
उनले उनीहरूको किशोर वर्षको दौडान रोसलाई डेटिङ गर्ने बेलामा उनीहरूलाई डाउन-डाउन-पृथ्वी जीवन शैलीको लागि चिनिइन्।
त्यो जमीन मा बर्र्कलेको खुट्टा राख्ने जिम्मेवारी र सम्मान छ। उनको इङ्गल्याण्डको म्यानमा एक बलियो पकड छ। फुटबल WAGS धेरै भन्दा विपरीत, जोस सामाग्री चीज जस्तै पैसा र प्रसिद्धि मा रूचि छैन। वास्तवमा, उनी एक पाउन्ड9प्रति घण्टा नर्सरी स्कूल अध्यापक हुनुहुन्छ।
उनको जीवनशैली यसको जस्तै छ वेन रोनीको पत्नी, कोलेन रूनी को लागि एक पल्ट को रूप मा इंग्लैंड अगाडी राखन को लागि चेक को लागि श्रेय दिइएको थियो। तपाईं जो डाउन ले पृथ्वी व्यक्तित्वको तुलनामा कोलेन भन्दा गहिरो छ।
जो युगाई, एउटी युगमा लिभरपूलको एउटै क्षेत्र हो र साथीहरू उनीहरूको सम्बन्ध हो 'बलियो हुँदै जाँदै'। वास्तवमा उनीहरूको सम्बन्ध बल-बल-शक्तिबाट आएको छ।
उनको प्रेमीको हालैको ट्रिप्स र £ 40,000 को हप्ताको वेतन जो जल्द बढ्ने तयारीमा लागी, जेभले सबै भन्दा माथिल्लो कारलाई ड्राइभर चलाउन गाह्रो छ। ब्रेज्ज्ज र रेंज रोभर भन्दा धेरै वरिपरि बाहिर जाने को लागी, मिस ज्वो रियोज्जी को एक मामूली फिएट 500 को पहिया पछि चुनेको छ। उनले एक कम कुञ्जी Fiat500 ड्राइभ गर्दछ जुन केवल £ 4,000 खर्च गर्दछ।
जोओ रियोजजी को तल देखि पृथ्वी को जीवन शैली
दुवै प्रेमीहरू बखनहुम पैलेस र दुबई भ्रमण गर्न मन पराउँछन्। जोकोको चिनारी प्रोफाइलमा एक छुट्टिको स्न्यापले उनीहरुलाई धूप ब्रेकमा पूलबाट देखाउँछ। उनले यहाँ सुन्दर सुन्दर देखिए।
जोस रियोज्जी रस संग छुट्टै बिताईन्छ
रस बर्कले Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
Ross जन्म द्वारा धैर्यता छ। उनको निम्न राशि को रूप मा उनको राशि को व्यक्तित्व को सम्बन्ध छ।
रस बर्कलेको शक्ति: हास्य को उदार, आदर्शवादी र महान भावना।
रस बर्कलेको कमजोरीहरू: भन्दा धेरै वादा गर्न सक्दछ, धेरै अस्थिर, केहि पनि भन्नेछ कि कुनै विचलित कसरी हुनेछ।
रोस बर्र्कले कस्तो मनपर्छ? स्वतन्त्रता, यात्रा, दर्शन र बाहिर जाँदैछ।
के रस बर्र्कले नमनपराउँछ: घनिष्ठ मान्छे, अवरोध र बन्द भित्री सिद्धान्तहरू।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -ठूलो पंच
एकपटक दु: खी दृश्य देखापरेपछि रस बर्कले एक शरिर पट्टी झगडामा झिक्न थाल्यो। फर्शमा गिरनु अघि उनी अनुहारको छेउमा पसेको थियो।
बर्र्कले गरेको वकीलले उनीहरूलाई पीडितको हत्या गरेका थिए "अजनबी द्वारा आक्रमण नगर्ने जसले आक्रमण गरे"।
यो बिहान यो बिहानको शुरुआती घडीमा लिभरपूल सिटी सेन्टरमा सांता च्यापिटोस ककटेल बारमा आक्रमण भयो। उनको टोलीले GoodNet Park मा लिसेस्टर सिटी भन्दा 4-2 जितेको केही घण्टा पछि मात्र आयो।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
हो, तपाई जस्तो हुन सक्छ जस्तो लाग्यो, यो सत्य हो। रस बर्कले Nigerian मूलको हो।
आफ्नो दादा पनि नाइजीरिया हो।
जस्तै Dele Alli, बर्र्कले ने नाइजीरियाका लागि खेल्न अस्वीकार गरेको छ। उनले सुपर ईगलहरूको लागि बाहिर आउट गर्न योग्य थिए जसलाई 2013 मा इंग्ल्यान्ड वरिष्ठ टीमको लागि प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो प्रतियोगिता बनाइयो।
विश्व कप क्वालिफायरमा मोल्डोभा विरुद्धको पहिलो खेलमा पहिलोपटक रुसले एकपटक भने कि नाइजीरिया एक देश हो जुन उनीहरूले इंग्ल्याण्डबाट अलग गरेको हुन सक्छ। उनको पिता, ईन्जिनियर पीटर इशान्गा र आमा, डायन बर्कले अझै पनि लिभरपूलमा बसिरहेका छन्।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -Racism of Victim
एक सेतो हुँदा, के तपाईंको अफ्रिकाको कुनै पनि अभिभावक वा पुर्खालाई अपराध छ? ...
Everton एकपटक रस बार्कले एक लेखमा आफ्नो परिसरबाट सूर्य ट्याब्लेइडलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ कि आलोचकहरूले ब्रान्ड गरे "नस्लवादी".
स्तम्भकार केल्विन म्याककेन्जे बर्कले, नाइजेरियाका एक दादाको रूपमा, एक "चिडियाघरमा गोरिल्ला" र लेभरपूलको मात्र एक मात्र व्यक्तिले आफ्नो आय दबाइ डीलडर थिए।
लेख हेडलाइन गरिएको थियो "यहाँ तिनीहरू किन रस मा एप जान्छन्" बर्कले र एक गोरिलाका तस्वीरहरु सँगसँगै।
यो प्रकाशन हेर्दा, लिभरपूलको महापौर जो एन्ड एन्डसनले यसलाई प्रहरी र स्वतन्त्र प्रेस मानक संस्थालाई रिपोर्ट गरे जुन यसलाई भनिन्छ "नस्लवादी र अपमानजनक"। सूर्यको प्रकाशक समाचार यूकेले एक बयानमा भन्यो कि म्याककेजे "तुरुन्त प्रभावको साथ निलम्बित गरिएको थियो"।
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -Chelsea Snub
रसले एकपटक स्टामफोर्ड ब्रिजमा स्विच पूरा गरे तर अन्तिम समयको म्यादमा एक आश्चर्यजनक यू-ब्याक प्रदर्शन गरे जुन अन्तर्वार्ता चेल्सी एफसीका लागि निराशाजनक टेलिभिजन भएको थियो।
एन्टोनियो कन्टे रस्सा बर्कले निर्णय गरेपछि चेल्सीमा पुग्ने निर्णयलाई रोक्न सुझाव दिएपछि इंग्ल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतालाई सम्झौता गरेको थियो। एन्टोनियो कन्टे फोनमा।
दाबी गरिएको रिपोर्ट एन्टोनियो कन्टईको तिनको फोन बन्द गरिएको थियो वा 23 वर्ष पुरानोसँग बोल्न निर्देशनहरूका लागि थियो।
जबकि कथा यो मामला थियो कि इन्कार गरे, उनले हस्ताक्षर नहीं गर्न को लागि बर्कली मा एक सूक्ष्म खुदाई को उद्देश्य। उनको शब्दहरुमा ...
'यदि एक खेलाडीसँग उत्कृष्ट क्लबको लागि खेल्न ठूलो इच्छा छ भने उसले संकेत गर्छ। कहिलेकाहीँ प्रबन्धकको लागि यो एक संकेतमा अघि बोल्न आवश्यक छ। अन्य समय यो छैन। मैले बिना बोल्ने धेरै खेलाडीहरूलाई हस्ताक्षर गरेँ। "
रस बर्कलीको बचपन स्टोरी प्लस अनकली जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
अक्टोबर 23, 2017
एन्टोनियो रुडेरियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिइन्
एरिक डायअर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अक्टोबर 24, 2017